नेपाली भाइरल युवतिको वास्तविकता, यस्तो छ भिडियो | NewsSudur
पछिल्लो केहि दिनयता सामाजिक संजाल फेसबुकमा दुई युवतिको तस्बिर नि कै नै भाइरल भइरहेको छ । उनीहरुको अ श् लील भिडियो लि क भएपछि सामाजिक संजाल ता ति एको हो । नेपाली युवति भनेर च र्चा गरिएका ती दुई युवतिको वास्तविकताका बारेमा विभिन्न टि का टि प्प णी गरिएको छ । केहिले यस्ता भिडियोहरु भा इरल गराएर कसैको चरि त्र ह त्या गर्नु नहुने भनेर प्रतिक्रिया जनाएका छन् त केहिले प्रेमिप्रेमिकाबिच नि कट सम्बन्ध हुँदा एकअर्कोलाई खुशी पार्न खोज्दा भएको दु र्घ ट्ना भनेका छन् । वास्तवमा, यी दुई युवतिको अ श् लील भिडियो समाजिक संजालमा भा इरल भएको हो । मोबाइलले खिचेको उक्त भिडियोले अहिले अहिले नेपाली युवाजमातमा हं गामा म च्चाइ रहेको छ । दुई फरकफरक युवतिहरुको आआफ्नै परिचय छ । यता, नेपालमा भने फिलिपिन्सको युवति भन्दै फिलिपिन्सका युवतिहरुलाई नेपालीले म्यासेज पठाइरहेको एक युवतिले फेसबुकमा पोष्ट गरेकि छिन् । उनले आफूलाई नेपालमा बिना कारण भाइरल बनाएको भन्दै आफू उक्त युवति नभएको बताइन् । आफ्ना यौ नां ग सँग र मिरहेकि उक्त युवति अरु कोहि नभएर विदेशि केटि रहेको चर्चा छ ।
दुवै युवति बाहिर देशको रहेको र उक्त भिडियो पहिलेदेखिनै पो र्न साइटमा पनि रहेको धेरैले प्रतिक्रिया जनाएका छन् । लकडाउनका कारण फुर्सदिला बनेका युवायुवतिहरुले नेपाली जस्तो देखिने युवतिहरुको फोटो हालेर भाइरल गराउन यस्तो गरेको धेरैले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
तथ्यांकले भन्यो नेपालमा ; ‘पो र्न सा इट’ हेर्न गाउँमा किशोरी बढी उ त्सुक
केहि समयअघि नेपालको चर्चित अनलाइन अनलाईनखबर डट कमले पो र्न साइट प्रतिको उत्सुकताका बारेमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । यस्तो छ उक्त समाचारः नेपालमा इन्टरनेटको प्रयोग गर्नेहरुमध्ये अ श्ली ल सामाग्री (पो र्न सा इट) हेर्नेमा पुरुष धेरै होलान् कि महिला ? सबैको उत्तर आउँछ पुरुष । तर, वास्तविकता अलि फरक देखिएको छ ।
नेपालको कुरा गर्दा पुरुषको तुलनामा महिलाले बढी पो र्न साइट हेर्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । त्यसमा पनि १० देखि १४ वर्ष उमेरका ग्रामीण भेगका केटीहरुको रुची बढी देखिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले केही समय पहिले गरेको किशोर किशोरी तथा युवा सर्वेक्षणले इन्टरनेटको माध्यमद्वारा अ श्ली ल सामाग्री (पो र्न साइट) हेर्नेमा १० देखि १४ वर्षका ग्रामीण भेगका केटीहरु केटा भन्दा निकै अगाडि रहेको देखाएको छ ।
इन्टरनेटमार्फत अ श्ली ल सामाग्री हेर्ने र पढ्नेमा ग्रामीण भेगका १० देखि १४ वर्ष उमेरका केटीहरु केटाभन्दा दुई गुणा बढी रहेको ‘किशोर किशोरी तथा युवा सर्वेक्षण प्रतिवेदन’मा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन अनुसार नेपालका ग्रामीण क्षेत्रका सो उमेर समूहका २ दशमलव २७ प्रतिशत केटीहरुले इन्टरनेटमा अ श्ली ल सामाग्री हेर्ने र पढ्ने गरेको पाइएको छ । जबकि सोही उमेर समूहका केटाहरुको प्रतिशत भने ० दशमलव ९२ प्रतिशतमात्रै रहेको छ ।
ग्रामीण भेगमा इन्टरनेटको पहुँच कम भए पनि इन्टरनेटमा पहुँच हुने सो उमेर समूहका बालबालिकाले अ श्ली ल सामाग्री हेर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
मन्त्रालयले देशका सबै भागको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी १० देखि २४ वर्ष उमेर समहुका करिब ९ हजार घरधूरीबाट ती उमेर समूहका १४ हजार जना किशोर किशोरी तथा युवाको सर्वेक्षण गरेको थियो । सर्वेक्षणबाट नेपालमा नेपालका १० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका १९ प्रतिशत पुरुष र ११ प्रतिशत महिलाले इन्टरनेट चलाउने गरेको पाइएको छ ।
इन्टरनेटको प्रयोग शीर्षकमा गरिएको अध्ययनले ग्रामीण भेगका १० देखि १४ वर्षका केटीहरु ‘पो र्न साइट’ हेर्नमा शहरी क्षेत्रका केटा तथा केटीहरुभन्दा धेरै अगाडि रहेको पाइएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार १० देखि २४ वर्षका दुई दशमलव ४१ प्रतिशत पुरुषले इन्टरनेटमा अ श्ली ल सामाग्री हेर्ने गरेको र सोही उमेर समुहमा शुन्य दशमलव ४२ प्रतिशत महिलाले अ श्ली ल सामाग्री हेर्ने गरेको पाइएको छ ।
अध्ययनले शहरी भेगका १० देखि १४ वर्षसम्मका महिला तथा पुरुष दुबैले अ श्ली ल सामाग्री नहेरेको, १५ देखि १९ वर्षका २ दशमलव ०१ प्रतिशत पुरुष र सो उमेरसमुहका ० दशमलव ८३ प्रतिशत महिलाले अ श्ली ल समाग्री हेर्ने गरेको देखाएको छ ।
त्यस्तै २० देखि २४ वर्षका दुई दशमलव ९१ प्रतिशत पुरुषले पनि अ श्ली ल सामाग्री हेर्ने गरेको देखाएको छ । अध्ययनमा २० देखि २४ वर्षका महिलाले भने अ श्ली ल सामाग्री हेर्ने नगरेको पाइएको छ ।
यसैगरी, अध्ययनले ग्रामीण क्षेत्रका पुरुषहरुमा १५ देखि १९ वर्षका दुई दशमलव ७९ प्रतिशत र २० देखि २४ वर्षका तीन दशमलव ५२ प्रतिशतले अ श्ली ल सामाग्री हेर्ने गरेको देखाएको छ ।
ग्रामीण भेगका महिलाहरुमा १५ देखि २४ वर्षका कुनै पनि महिलाले अ श्ली ल सामाग्री नहेरेको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।
ल हि ल हिमा नेपाली युवापिढी
केहि समययता नेपालमा अ श् लील भिडियोहरु छ् या प्छ्या प्ती देखिएको छ । सरकारले अ श् लील सामाग्री भएका वेबसाइटहरु ब न्द गरेपनि नेपालमा अ श् लील भिडियोहरु भा इरल हुने गरेको छ । नेपाली जस्ता देखिने विदेशी युवतिका बारेमा अनावश्यक नेपाली का ण्ड भन्दै भिडियो भाइ रल हुने गरेको हो । का ण्डको नाममा नेपाली युवतिको नाम जोडिने गरेको छ । केहि समय अघिमात्र अष्ट्रलियामा रहेकि नेपाली युवतिको भिडियो भन्दै समाजिक संजालमा भा इरल भएको थियो । पछि उक्त भिडियो कुनै नेपालीको नभएर पाकिस्तानी भएको पुष्टि भएको थियो । भाइ रल भिडियोले गर्दा अष्ट्रलियामा रहेका नेपाली युवायुवतिको ब द नाम भएको भन्दै धेरैले वि रोध गरेका थिए ।
पो र्न साइट ब न्द हुनै सक्दैन
पो र्न वेबसाइट सरकारले ब न्द गर्ने निर्णय गर्याे, इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ती साइटमा विभिन्न किसिमका सन्देश दिने गरेका छन् । जब सरकारले दुरसंचार प्राधिकरणलाई अ श्ली ल सामग्री भएका वेबसाइट ब न्द गर्न निर्देशन दियो, त्यसको केहि समयमै नेपालमा गुगलको प्लेस्टोरबाट भीपीएनसँग सम्बन्धित एपहरू एकदमै धेरै डाउनलोड भए अर्थात् जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भन्ने उखानलाई नेपालीहरूले चरितार्थ गरिदिए ।
भीपीएनको प्रयोग बढ्नुको अर्थ नेपाली आइएसपीहरूले नेपालमा नखुल्ने बनाइदिएका वेबसाइट खोल्न अब नेपालीहरू यो सजिलो विकल्प प्रयोग गर्न थालेका छन् । अर्थात सरकारले पो र्न साइटमा प्र ति ब न्ध लगाए पनि प्रविधिमा थोरै मात्र जानकार व्यक्तिले सहजै फेरि पो र्न साइटमा पहुँच बनाइसकेका छन् ।
गुगलको प्लेस्टोरमा भएका टप ११ वटा एपमध्ये भीपीएनसम्बन्धी ५ वटा एप हुनुले पनि नेपालमा पो र्न कति हेरिन्थ्यो भन्ने कुराको जानकारी पाइन्छ । नेपालकै सबैभन्दा चर्चितमध्येको एउटा फेसबुक पेजले केही समय अघि आफ्नो पेजमा प्रश्न सोधेको थियो, ब ला त्का र वा यौं न ज न्य हिं सा पो र्न साईट ब न्द गरेर न्यू नी करण हुन्छ ? उक्त प्रश्नको जवाफ दिने करिब ३२ हजार फेसबुक प्रयोगकर्तामध्ये लगभग ८६ प्रतिशतले उक्त कुरा इ न्का र गरेका छन् अर्थात उनीहरू पो र्न साइट ब न्द गरेकै भरमा यौ न जन्य हिं सामा कमी आउने कुरामा विश्वास गर्दैनन् ।
एलेक्साको र्यांकअनुसार नेपालमा हेरिने टप एक सयवटा वेबसाइटमा करिब ७ प्रतिशत वेबसाइट पो र्न सँग सम्बन्धित छन् । त्यस्तै गुगल ट्रेन्डले उपलब्ध गराउने तथ्यांकअनुसार नेपालमा पछिल्ला ५ वर्षमा यौ न सम्बन्धी सामग्री पनि गुगलमा धेरै नै खोजिने गरेको छ ।
सन् २०१५ मा भारतले पो र्नमा प्र ति बन्ध लगाउने भन्दै ८ सय ५७ वटा वेबसाइट ब न्द गराएको थियो । ब्या पक जन आ लो चनापछि केही समय पछि नै भारत सरकार आफैं उक्त प्रति ब न्ध बाट पछाडि ह टेको थियो । त्यस्तै बंगलादेशले सन् २०१६ मा अ श्ली ल वेबसाइट माथि प्र ति बन्धको घोषणा गरेको थियो भने त्यहाँ पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रह्यो ।
के प्रति ब न्धले यौ न हिं सा घट्ला ?
प्रश्न छ – के पो र्न साइटमा प्रतिबन्ध लगाउँदैमा यौ न हिं साका घटनामा कमी आउला ? यो तथ्य त अबको केहि समय पछि थाहा हुने नै छ । यद्यपि यो प्रति ब न्धको विरोधमा आएका स्वरहरू सुन्दा लाग्छ– यो प्रतिबन्ध ले यौ न हिं सा घटाउने भन्दा पनि उल्टै त्यसलाई बढावा दिन्छ ।
यदि अ श्ली ल चलचित्र हेर्दा यौ न हिँ सा र ब लात्का र बढ्छ भने चलचित्रमा ह त्या–हिं सा हेर्दा समाजमा ह त्याका घटनाले पनि प्रोत्साहन पाउँछन् । त्यस्तै कम्प्युटरमा रेसका गेम खेल्दा सडकमा सवारी दु र्घट ना बढछन् भन्दै कतै त्यस्ता सामग्रीमा पनि सरकारले प्र ति बन्ध लगाउने त होइन भन्दै सामाजिक संजालमा सरकारको आ लोच ना गर्नेहरूको संख्या बढ्दो छ ।